मनाङे छिरेपछि नेकपाभित्रै विरोध, योगेशको काउण्टरमा के भने मनाङेले ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार मनाङे छिरेपछि नेकपाभित्रै विरोध, योगेशको काउण्टरमा के भने मनाङेले ?
मनाङे छिरेपछि नेकपाभित्रै विरोध, योगेशको काउण्टरमा के भने मनाङेले ?
२०७६, २० असार शुक्रबार ०९:४६
सर्वोच्च अदालतबाट ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न रहेको ठहर गरी सजाय तोकिएका गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई पार्टी प्रवेश गराएपछि नेकपाभित्र तीव्र विरोध भएको छ । नेकपाका नेताहरूले पार्टीको नीति र सिद्धान्तलाई ख्याल नगरी विवादित व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार गुरुङलाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन् । गुरुङलाई प्रवेश गराउने क्रममा मुख्यमन्त्रीले नेकपा सुध्रिन चाहनेहरूका लागि एउटा प्लेटफर्म भएको धारणा राखेका थिए ।
‘कम्युनिस्ट पार्टीले विचारधारा र सिद्धान्तका आधारमा मान्छेहरू निर्माण गर्छ तर त्यो निर्माण गर्ने प्रोसेसिङ प्लान्ट नै बिग्रेपछि आउनुपर्ने मान्छे आउँदैनन्, नआउनुपर्ने आउँछन्, हामीकहाँ त्यस्तो हुँदै छ,’ मनाङेको प्रवेशप्रति आपत्ति जनाउँदै नेकपा नेता घनश्याम भुसालले भने ।
योगेश भट्टराइले पनि कस्ता व्यक्तिलाई पार्टीमा प्रवेश गराइएको बारे विचार गर्न नेतृत्वलाई सुझाएका छन् । भट्टराईले ट्विटमा भित्र्याएका व्यक्तिका कारण त्यसले दिएको परिणाम ख्याल गर्न सुझाव दिए । उनी लेख्छन्,‘राजनीतिक पार्टीलाई मान्छे त चाहिन्छ नै तर कस्ता मान्छे ? कस्ता कस्ता ल्यायौ ? कस्ता कस्ता ल्याउंदै छौ ? परिणाम् के भैरहेको छ ? राम्ररी विचार गरौं है !
सत्तारुढ दल नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले पार्टीमा अनगिन्ति मनाङेहरुको रहेको जनाएका छन् । मनाङेलाई पार्टीमा भित्र्याएको प्रति कटाक्ष गर्दै सामाजिक सञ्जालमा न्यौपानेले ‘अनगिन्ती मनाङे पार्टीमा पहिल्यै छन् र थिए,’ उल्लेख गरेका छन् ।
सांसद गुरुङले चाहीँ कम्युनिष्ट पार्टीले नै राम्रो गर्ला भनेर प्रवेश गरेको बताए । ‘स्वतन्त्र मान्छेहरुले धेरै कुरा चाहेर पनि गर्न नसक्दो रहेछ । सल्लाह लिनुप¥यो को सँग लिने ? जति फण्ड छ, जति म्यानपावर छ, त्यो सबै पार्टीमा हुने रहेछ, उनले भने, म सहजताकै लागि पार्टीमा आएको हो,’ उनले भने ।
योगेश भट्टराईले गरेको विरोधप्रति गुरुङले ठमेलको रिस साँध्नका लागि बक्तब्य दिएको बताए । ‘वहाँको पटक पटक नेगेटिभ कुरा आउँछ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीलाई पनि नेगेटिभ रुपमा टिप्पणी गरिरहनुहुन्छ । वहाँले ठमेल टुरिजममा एउटा मान्छे दिएको थियो (अर्जुनलाल जोशी) । वहाँ जेल जानुपर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो । तर जेल चाहीँ पठाएनौं । त्यस्ता मान्छेलाई कमिटीमा राख्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘त्यसकै विरोध अहिले योगेश जीले गर्नुभएको छ । वहाँले त आफ्नै क्षेत्रमा गर्ने हो, मेरो प्रदेशमा किन बोल्नुपर्यो । मेरो प्रदेशको चिन्ता लिनुपर्दैन । आफ्नै प्रदेश हेरे भैहाल्यो नि ।’
Previous articleअसारे विकास : ‘सय रोपनीभन्दा बढी भर्खर रोपेको धान खेत नष्ट भएपछि पागलजस्तै भएँ’
Next articleएसईई पूरक परीक्षा साउन २६ देखि (तालिकासहित)